The Galaxy S7 na S7 ihu natara March nche melite | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Samsung, Nche
Estamos ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 4 ka mwepụta nke Galaxy S7 na S7 Edge ha ka na-enweta mmelite nchebe dị mkpa maka ekwentị. Ọ bụ ezie na ihe niile nwere ike ịgbanwe n'ọnwa na-abịanụ, ebe ọ bụ na anyị ga-abanye n'afọ nke ise ma enweela obere mpempe akwụkwọ.
Abụọ Samsung ndị a natara ya kacha ọhụrụ na gam akporo update na mbipute 8.0 nke akpọrọ dika Oreo. Sfọdụ S7 nke bụ akụkụ, ọkachasị ọnụ, nke asụsụ ọhụụ ọhụụ nwere akụkụ akụkụ yana na anyị na-aga n'ihu na-ahụ na njedebe dị elu nke Samsung.
Ndị ọzọ okwu, na South Korea buru ibu na-aga n'ihu ịmalite ya mmelite nchekwa, mana dịka anyị kwuworo, bido n’ọnwa a ihe nwere ike ịgbanwe, dịka anyị ga-aba n’afọ nke ise nke mmelite.
Ihe ndị a bụ naanị ịhapụ mmelite mgbe ha dị oke egwu. Nke ahụ bụ, anyị agaghịzi ahụ mmelite ndị ahụ kwa oge, mana kama ịkọwapụta nke ahụ ga-abụ izere itinye nchekwa nke ekwentị, ma n'otu oge ahụ nke ndị ọrụ na-eji ha.
N'ezie, S7 abụọ na S7 Edge natara ihe nchekwa nchekwa nke March iji tinye ha na ndị ọzọ nke nnukwu ụlọ ọrụ Korea. Ntuziaka Samsung maka ekwentị ya na-aga maka Afọ 3 na-anata mmelite nche, nke anọ na mmelite kwa ọnwa atọ na nke ise yana ndị nkatọ ma chọọ ya nke ọma.
Ọ bụrụ n'inwere otu n'ime ekwentị ndị a, egbula oge n'ịlele ma ọ bụrụ na ịnwee mmelite ahụ site na ntọala ha. Ma ọ bụ anyị nwere ike chọta S7 na S7 ihu firmwares na nchekwa, na ọtụtụ oge ha bụ ebe kachasị mma iji melite igwe tupu enwee ndidi dị nsọ nke iru ha site na OTA.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » The Galaxy S7 na S7 Edge-anọgide na-enweta nchedo nche
S7 nwụrụ dijo
Ọ dị ezigbo mma! Ọ bụ isiokwu izizi m chọtara banyere nwelite ikpeazụ. Ọ na-apụta na awụnyere m ya tupu ụnyaahụ na taa ekwentị gbanyụrụ na mberede dịka ọ dịtụbeghị mbụ.
Enwere m nkụda mmụọ .. Enwere m ya kemgbe 2017, agbalịrị m ịme ụdịrị ụdị ọ bụla (reboot nkịtị, a manyere ya na olu dị ala, a manyere ya n'ike, ma ya na bọtịnụ ụlọ ya na ihe ọ bụla…) M kpọtụụrụ Samsung Custom Care ma ha enweghị ike ime ihe ọ bụla e nyere na maka Covid19 ihe kpatara enweghị enyemaka ọ bụla.
Ana m ekwupụtakwa na mgbe m tinyere ya ụgwọ, ọ naghị ana ụgwọ (chaja ọkụ na-acha uhie uhie anaghị acha ọkụ).
Biko, ọ bụrụ na otu ihe ahụ emere mmadụ ma ha enwee ike idozi ya, m ga-enwe ekele maka enyemaka ahụ.
Esi gbanwee mkpebi ihuenyo gam akporo gị
Esi gbanwee ọkwa ngosi na EMUI 10